Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay miisaaniyada 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo ansixiyay miisaaniyada 2020
November 23, 2019 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah ansixiyay miisaaniyada 2020, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka.
44 xildhibaan oo fadhiday kulanka maanta ayaa dhammaantood ogolaaday, guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sidaas sheegay.
Miisaaniyada 2020 ayaa lagu qiyaasay $346 milyan, taasoo muujinaysa koror balaaran marka loo barbardhigo tii sanadkii 2019 oo ahayd $72 milyan.
Sida uu sheegay wasiirka maaliyada Xasan Shire Abgaal, sanadkan miisaaniyada ayaa lagu daray mashaariicda laga filayo haayadaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale aan dowliga ahayn ee caalamiga ah taasoo kordhisay odoroska miisaaniyada 2020.
Ku dhawaad 60% miisaaniyada Puntland ayaa ku baxda ammaanka iyadoo ay dagaal kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab, ee ku xiran ururweynaha Al-Qaacida, iyo sidoo kale koox yar oo sheegtay in ay daacad u yihiin ISIS.
July 3, 2020 Wasaaradda Maaliyada Puntland oo sheegtay in qiyaastii $40 milyan oo dakhli ah ay lumisay 2020 coronavirus dartiis